Glass antonony, vera voamarina, vera voaroaka - LYDGLASS
Miaraka amin'ny traikefa an-tserasera mihoatra ny 20 taona, Vonona ny hamaly ny vahoakantsika ao anatin'ny 7 ora.
Rafitra fanaraha-maso henjana
Fitsipika kalitao: AS / NZS 2208: 1996, CE-EN12150, ANSI Z97.1, CAN CGSB12.1-M90.
OEM sy Custom-Made
Izahay dia za-draharaha amin'ny OEM (Custom-Made) GLASS & MIRROR.
Mampahafantatra ny haitao mandroso famokarana iraisam-pirenena sy akora manta avo lenta ho an'ny vokatra seramika.
Diffuse Glass ho an'ny gree ...
Savily fitaratra henjana ...
8mm 10mm 12mm tezitra ...
Varavarana fitaratra voaharo ...
Glas voaharo mahitsy ...
4mm voasarona fitaratra fo ...
3mm vera henjana ...
10mm 12mm tezitra gla ...
5mm mazava tezitra gla ...
8mm asidra vita sokitra varahina ...
Trano fonenana aluminium
Fiaramanidina fitaratra tsy misy fatrany
FIVORIANA POOL GASY
vera vita amin'ny vy vita amin'ny alimina
fonosana patio fitaratra
Jul-30-2021 3.2mm na 4mm fitaratra somary mangarahara momba ny masoandro
Jul-29-2021 Inona ilay vera mazava be? Inona no maha samy hafa azy amin'ny vera tsotra?
Jul-29-2021 Fantatrao ve ny hafanan'ny fanodinana vera fitaratra?
Jul-29-2021 Ahoana no hisorohana ny sisin'ny sisin-tany rehefa manapaka fitaratra amin'ny jet jet?
Jul-29-2021 Ahoana no hanavahana ny "vera" - ny tsy fitovizan'ny tombony azo amin'ny vera misy laminated sy ny vera insulate
Jul-16-2021 1/2 ”na 5/8 ″ matevina matevina matevina, vera voahidy ho an'ny fefy gilasy
Jul-16-2021 Varavarana fandroana Glass 10mm
Niorina tamin'ny taona 1998, QinHuangdao LianYiDing Glass Co., Ltd. miorina ao Qinhuangdao City, akaikin'ny seranan-tsambo QinHaungdao sy Tianjin miaraka amina fitaterana mety. LYD Glass ho mpanamboatra fitaratra sy mpamatsy fitaratra any Chine Avaratra, mifampiresaka amin'ny Glass Tempered, vera misy vera, vera insulated, fitaratra, vera misy afo, vera voadona hafanana, vera fanonta lamba ary vera Low-e.
Amin'ny maha mpanamboatra sy mpamatsy fitaratra fanodinana lalina anay, ny veranay dia manondrana any Amerika, Eropa, Afrika atsimo, Azia atsimo, Amerika avaratra. Ka raha mifidy anay ianao dia afaka manome anao ny kalitao sy serivisy tsara indrindra!